Inona ny fiovan'ny toetrandro? | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Inona ny fiovan'ny toetrandro?
Monica sanchez | | Fiovan'ny toe-trandro
Azo antoka fa efa naheno imbetsaka ianao tato anatin'ny taona vitsivitsy momba ny fiovan'ny toetr'andro sy ny vokany eo amin'ny antonony sy maharitra. Fa, Fantatrao tokoa ve ny dikan'io voambolana io ary raha matotra araka ny filazan'izy ireo?
Ny zava-misy dia ny fiovan'ny toetrandro foana, satria tsy inona izany fa ny fanovana maharitra ny toetrandro noho ny fihoaram-pefy fanafanana ny tontolon'ny tany manontolo. Amin'ny toe-piainana voajanahary dia dingana mahazatra izy io, izay mahazatra an'izao tontolo izao, fa ny olombelona tato anatin'ny folo taona lasa dia nampitombo izany tamin'ny alàlan'ny antsoina hoe effet greenhouse. Amin'izay mba, Inona ny fiovan'ny toetrandro?
1 Inona ny fiovan'ny toetrandro?
1.1 Antony lehibe
2 Antony voajanahary
3 Antony antropogenika
4 Vokatry ny fiovan'ny toetr'andro ankehitriny
4.1 Vokatry ny zavamananaina
4.2 Vokany eto ambonin'ny tany
Meteorolojia dia sehatry ny fikarohana lehibe sy sarotra, nanomboka ny toetr'andro tsy mbola nijanona, ary ity dia zavatra izay tsikaritray manokana amin'ny fandehan'ny fizaran-taona, ary na dia amin'ny andro aza. Betsaka ny anton-javatra tafiditra amin'izany: ny haavony, ny halaviran'ny ekoatera, ny onjan-dranomasina, sns. Rehefa miresaka momba ny 'fiovan'ny toetr'andro' isika dia miresaka ny fiovana manerantany maharitra amin'ny toetrandro terrestrial. Ny teny dia noforonina tamin'ny taona 1988 avy amin'ny vondrona mpahay siansa nanatsoaka hevitra fa ny fitohizan'ny famoahana gazy karbonika dia manafaingana ny fiovan'ny toetr'andro voajanahary.
Ireo manam-pahaizana ireo dia namoaka andiana tatitra izay ny ankamaroan'ny governemanta lehibe tsy maintsy manaraka raha tsy tian'izy ireo handeha lavitra ny vokatra manimba.
Ny antony mahatonga ny fiovan'ny toetrandro dia mety voajanahary o anthropogenic, izany hoe amin'ny asan'ny zanak'olombelona.
Anisan'ny antony voajanahary lehibe ahitantsika ireto manaraka ireto:
Ny sahan'andriamby eto an-tany
Fiantraikany amin'ny toetr'andro na asteroid
Izy rehetra dia nisy fotoana indraindray nahatonga fiovan'ny toetrandro. Ohatra, 65 tapitrisa taona lasa izay, asterôida iray no namely ny Tany ary niafara tamin'ny nahatonga ny vanim-potoanan'ny ranomandry iray, namafa ireo dinôzôro vitsivitsy tavela tavela taorian'ny loza. Tato ho ato dia neken'ny teôria fa 12.800 XNUMX taona lasa izay, meteorita iray namely an'i Mexico no nahatonga an'io zavatra io ihany.
Tsy azo atao ny miteny fa ny olona dia afaka manaratsy ny fiovan'ny toetr'andro mandra-pahatongan'izany el Homo sapiens hanomboka handoro ala ny ala hamadika azy ireo ho tanimboly. Marina fa nandritra io fotoana io (tokony ho 10 taona lasa izay) ny zanak'olombelona dia tsy nihoatra ny dimy tapitrisa, na dia olo-manan-danja aza izy io, ny fiantraikan'ny tany dia ambany noho ny ankehitriny.
Efa eo am-piandohana hahatratra olona 7 miliara isika izao. Ary ny zavatra ataontsika amin'ny planeta dia manomboka mandray ny vokany, satria hatramin'ny Revolisiona Indostrialy dia nampitombo ny fandefasana entona toa ny gazy karbonika na metana, izay manampy amin'ny fanatsarana ny vokatry ny entona. Fa, inona no ahitana azy?
Rehefa miresaka momba io fizotrany io dia resahina ny fihazonana hafanana avy amin'ny masoandro eny amin'ny habakabaka amin'ny alàlan'ny sosona gazy (toy ny CO2, methane na oksida nitrous) hita ao. Zava-dehibe ny fahalalana fa raha tsy misy an'io vokany io dia tsy mety hisy ny fiainana araka ny ahalalantsika azy, satria hangatsiaka loatra ny planeta. Ny natiora no miandraikitra ny fandanjana ny entona, fa izahay kosa nanamafy azy ireo: nitombo 30% ny fandefasana entona hatramin'ny taonjato lasa.
Androany, ny mpahay siansa rehetra dia manaiky fa ny fomba famokarantsika angovo sy ny fanjifantsika dia manova ny toetrandro, ary izy io koa no hiteraka misy fiatraikany lehibe eto an-tany ary, noho izany, ny fomba fiainantsika.
Raha ny tatitra farany avy amin'ny Intergovernmental Panel momba ny fiovan'ny toetr'andro (IPCC) dia efa manomboka tsapa manerana ny tany ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetr'andro. Niakatra 0,6ºC ny mari-pana tamin'ny taonjato faha-10, ary 12 hatramin'ny 0.4 centimetatra ny haavon'ny ranomasina. Tsy mampanantena velively ireo vinavina: ny mari-pana eo anelanelan'ny 4 sy 25 degre ambonimbony dia antenaina mandritra ny taonjato faha-82 sy fiakaran'ny haavon'ny ranomasina eo anelanelan'ny XNUMX sy XNUMX santimetatra.
Vokatry ny fiovan'ny toetr'andro ankehitriny
Fantatray fa hiakatra ny mari-pana, saingy Inona no tsy maintsy atrehana? Ny fananana toetrandro mahafinaritra kokoa dia mety ho vaovao amin'ny olona maro, fa ny marina dia tsy maintsy miomana amin'ny vokany izay afaka manova ny tontolontsika mandrakizay isika.
Vokatry ny zavamananaina
Maty, aretina, allergy, tsy fanjarian-tsakafo,… raha fintinina dia hitombo izay rehetra tsy tiantsika noho ny hafanana be. Ho fanampin'izany, hisy ny aretina vaovao hipoitra, ary ireo izay mifantoka amin'ny faritra tropikaly matetika, dia mandroso mankany amin'ny latitude afovoany.
Voakasik'izany koa ny zava-maniry sy ny biby: Ny hetsika lohataona toy ny voninkazo na ny atody atody dia ho tonga aloha. Ny karazana sasany dia hijanona tsy hifindra monina, ary ny sasany kosa terena hanao izany raha te-ho velona.
Vokany eto ambonin'ny tany
Amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fandefasana entona CO2, ny ranomasina dia hisitrika betsaka kokoa an'io gazy io ihany koa ho asidra. Vokatr'izany dia ho faty ny biby maro, toy ny haran-dranomasina na ny akamako. Amin'ny latitude avo dia hiova ny habetsahan'ny ahidrano sy plankton.
Nosy sy morontsiraka iva ho rendrika anaty rano noho ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina; ary amin'ny faritra maro dia hisy ny tondra-drano ho iray amin'ireo olana mampitebiteby indrindra izay hatrehin'izy ireo.
Amin'ny lafiny iray, hihamafy ny haintany any amin'ireo faritra izay zara raha misy ny rotsakorana.
Araka ny efa hitanao, ny fiovan'ny toetrandro dia zavatra matotra tokoa ary tokony ho fantatry ny rehetra, indrindra ireo mpitarika ny firenena matanjaka eran-tany. Amin'ny fe-potoana antonony, ny planeta dia mety hijaly amina andiam-vokany tsy azo ovaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fiovan'ny toe-trandro » Inona ny fiovan'ny toetrandro?
Alejandra Valois Almazán dia hoy izy:
Toa RAY sy mahaliana ahy no hitako fa ahoana no ahafahantsika misoroka ny fiovan'ny toetr'andro
Valiny tamin'i Alejandra Valois Almazan
Ny fiovan'ny toetr'andro dia nisy ary hisy hatrany. Androany anefa, ny olombelona dia manao zavatra be loatra mba hanafainganana azy io sy hanaratany azy.
Betsaka ny zavatra azo atao hisorohana ny loza:
-Mikarakara sy miaro ny tontolo iainana
-Mampiasà rano tsara sy ny harena voajanahary rehetra ananantsika
-Mampiasà isaky ny afaka, na manamboatra
-Mividy vokatra avy amin'ny faritra misy anay (isan'andro ny ivon-toeram-pivarotana lehibe dia feno vokatra izay nentina avy any amin'ny firenen-kafa; izany hoe, tonga tamin'ny sambo sy / na fiaramanidina, izay mamoaka entona mandoto ny atmosfera)
MJ Norambuena dia hoy izy:
Hitako fa tena mahasoa ity lahatsoratra ity, saingy azonao lazaina ve hoe inona avy ireo loharanom-baovao? Tsy misalasala aho amin'izay lazainao (raha ny tena izy dia zaraiko) fa, eo amin'ny tontolon'ny siansa, tsara kokoa ny manana fanampiana avy amin'ny literatiora siantifika. Amin'izany fomba izany dia manampy olona maro ianao hahafantatra momba ireo izay tena mahalala (ny mpahay siansa) fa tsy havela irery amin'izay henoiny na vakiny (izay, imbetsaka, mety ho hevitra tsy mitombina).
Valiny tamin'i MJ Norambuena
Honko, fiarovana voajanahary amin'ny rivodoza
Ny onja Humboldt